John Terry Oo Shaaciyay Kooxda Weyn Ee Premier League Ee Uu
Halyeeyga Chelsea John Terry ayaa markii uu caruurta ahaa waxa uu si waali ah u taageeri jiray Manchester United, laakiin inkastoo uu la cunteeyay halyeeygiisa Paul Ince hadana taasi kama aysan dhaadhicinin inuu u saxiixo Red Devils.
Terry oo 39 sanno jir ah ayaa 717 kulan u saftay Chelsea isagoo kula guuleystay 15 koob oo waa weyn 20kii sannadood ee uu Chelsea joogay.
Laakiin sheekada sidaas waa ay ka duwanaan laheyd haddii Sir Alex Ferguson uu ku guuleysan lahaa qorshihiisa.
Bilowgii 90meeyadii, Terry waxa uu u ciyaarayay koox xaafadeed lagu magacaabo Senrab, waxaana markaas loo arkayay mid ka mid ah da’ yarta ugu fiican Ingariiska.
Waqtigaas wuxuu ka ciyaari jiray khadka dhexe, ma uusan aheyn daafac, kooxaha oo dhan ayaa rag soo daawada isaga u dirsaday oo ay ku jirtay Manchester United.
Sir Alex Ferguson ayaa isku dayay inuu Terry keeno Old Trafford markii uu u dabaaldegay dhalashadiisii 17aad ee uu saxiixi karay qandaraaskiisii ugu horeysay ee xirfadlenimo.
Terry ayaa shaaca ka qaaday in markii uu 13 sanno jir ahaa in lagu martiqaaday qado ay garoonka Upton Park ku lahaayeen xiddigaha Man United ka hor kulan ay la ciyaarayeen West Ham oo ka dhisan xaafadii uu deganaa.
Terry oo haatan caawiye tababare ka ah Aston Villa ayaa sheegay in Ferguson uu weydiiyay xiddiga uu ugu jecel yahay United.
Markii uu ku jawaabay inuu yahay Paul Ince, tababaraha halyeeyga ah Ferguson ayaa u sheegay Terry inuu la fariisto Paul Ince oo uu la cunteeyo.
Terry ayaa yiri: “Waan aamini waayay. Waxaan garab fadhiyay Paul Ince, ciyaaryahankii aan ugu jeclaa, waxba ma aanan cuni karin sababtoo ah waxaan ka baqayay inaan cunto ku daadiyo meel walba.”
Terry ayaa waqtigaas u saxiixay Chelsea inkastoo uu qirtay inay aheyd go’aan adag oo kala qeybiyay qoyskiisa.
“Waxay aheyd go’aan adag” ayuu yiri.
“Manchester United waxay aheyd kooxdeyda iyo kooxda aabaheey. Taageerayaal ku waalan Man United ayaan aheyn. Eric Contana iyo Ince ayaa geesiyaasheyda ahaa.
“Waa ay ka careysiiyay aabaheey laakiin waxaan arki karay in Chelsea ay meel u socoto”
Terry ayaa shaaca ka qaaday in aabihiis uu aad uga careysnaa inuu u saxiixo Chelsea isagoo xitaa diiday inuu qandaraaskiisa Stamford Bridge la saxiixo madaama uu caruur ahaa waqtigaas islamarkaana uu sawirka qoyska kula dhex galo garoonka Stamford Bridge.
“Aabaheey marnaba ma uusan dooneynin inaan u saxiixo Chelsea.
“Xaqiiqdii markii aan garoonka dhexdiisa ku saxiixayay foomkeyga iskuulka ee kooxda, aabaheey waa uu diiday inuu garoonka ila galo, waxaa ila gashay hooyadeey madaama waalid loo baahnaa, taasoo keentay inuu aabo ku qeyliyo hooyo”